Azonao atao ny mihena amin'ny iOS 6.1.3 mankany iPad2 sy iPhone 4S | Vaovao IPhone
Tsy takona afenina fa ny iPad 2 sy ny iPhone 4S, samy manana processeur mitovy (AX5 sy A5) sy RAM 512mb, Efa antitra be izy ireo tamin'ny fahatongavan'i iOS 7. Ilay zavatra, lavitra ny manatsara, mbola miharatsy hatrany amin'ny fahatongavan'i iOS 8. Marina fa mampanantena ny iOS 9 hamaha ny olan'ny fampisehoana farany an'ireo fitaovana ireo, saingy tsy azo inoana fa mihetsika izy ireo amin'ny fahombiazana izay nataony tamin'ny iOS 6.
Raha te hiverina ianao ary tsy afaka dia mitondra vaovao tsara ho anao izahay. Nahavita nanararaotra ny tsy fahombiazan'ny Apple ny mpamorona iray amin'ny famerenana ny iPhone 4S sy iPad 2 amin'ny kinova izay niasan'izy ireo tanteraka ary izany, ho fanampin'izay, azo atao ny mamaky azy io. Azo averina amin'ny iOS 6.1.3 tsy mila manana famonjena SHSH. Mahagaga, sa tsy izany?
Nahatratra izany ny mpamorona tihmstar (miaraka amin'ny fanampian'ny winocm sy iH8sn0w) amin'ny alàlan'ny zavatra iray nantsoiny odysseusOTA, fitaovana zotram-baiko izay Manararaotra ny fisian'ny Apple manao sonia ny OTA ho an'ny firmware 6.1.3 ho an'ny iPad 2 sy iPhone 4S. Ao anatin'ity horonantsary manaraka ity dia manana fanazavana tsikelikely (amin'ny anglisy). Amin'izao fotoana izao dia tsy miasa afa-tsy amin'ny Mac, saingy hanamboatra fitaovana ho an'ny Windows sy Linux izy io.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataonao dia ny misintona ny firmware an'ny fitaovanao amin'ny Internet www.getios.com, ohatra, misintona isika odysseusOTA ary ny rakitra README (manana ny rohy ianao amin'ny famaritana horonan-tsary) izay misy ny tsipika baiko. Avy eo dia mila manaraka ireo dingana ao amin'ilay horonan-tsary ianao. Manoro hevitra aho ny hampandeha ireo dikanteny ho an'ireo izay tsy mahazo tsara ny teny Anglisy.
Raha te hampiasa oddyseusOTA dia tsy maintsy manana fitaovana manokana miaraka amina A5 izay nametraka ny iOS 5.0.1 na ny iOS 5.1.1 napetraka. Ny hany fitaovana tohanan'ny iPhone 4S sy iPad 2. Na dia toy ny iPad 2 aza ny iPad mini dia tsy afaka manatanteraka ny fizotrany satria efa tonga tamin'ny iOS 6 izy
Voalaza fa tsy afaka manarona an'io tsy fahombiazana io i Apple satria raha tsy izany dia mety hisy fitaovana sasany izay tsy afaka manavao amin'ny alàlan'ny OTA, ka io fomba io dia mety hiasa mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Mazava fa ny iPhone Actualidad dia tsy tompon'andraikitra amin'ny olana mety hiseho mandritra ny fizotry ny fidinana. Ianao no manapa-kevitra raha zava-dehibe ny miatrika ny risika hiverenana amin'ny kinova mahery kokoa noho ilay ampiasainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 4S » Manana iPad 2 / iPhone 4S ianao ary tsy tianao ny iOS vaovao? Azonao atao ny mihena amin'ny iOS 6.1.3
Ennio Jesus Montes dia hoy izy:
Francisco Rosas Pedro Montes na:
Valiny tamin'i Ennio Jesús Montes
Rafael Aranguren dia hoy izy:
Azo atao amin'ny Windows ve izany?
Valiny tamin'i Rafael Aranguren
Francisco Rosas dia hoy izy:
Valiny tamin'i Francisco Rosas
Marcelo Carrera placeholder image dia hoy izy:
Mahafinaritra !!! Andraso izao raha hivoaka ny fanohanana Windows satria tsy manana Mac aho 🙁
Valiny tamin'i Marcelo Carrera
Aitor Fernandez Sandros dia hoy izy:
Valiny tamin'i Aitor Fernández Sandros
Takelaka feno Ipads Cayo dia hoy izy:
Ny zavatra ratsy dia tsy manaiky watsapp ity kinova ity, ary fampiharana an'arivony maro hafa satria efa antitra be
Valiny amin'ny Tablets feno Ipads Cayo
Daniel Montero dia hoy izy:
Tsy hoe whatsapp avy amin'ny iOS 4 ve no miasa?
Valiny tamin'i Daniel Montero
Manitsy aho, mangataka iOS 6 na avo kokoa.
Manantena aho fa hamoaka haingana ilay fitaovana ho an'ny Windows izy ireo
iLuisD dia hoy izy:
Misy mahalala ny fomba hanaovana azy amin'ny iPhone 4?
Mamaly an'i iLuisD
Sda dia hoy izy:
Ary ny iPad mini 1? Ity iray ity koa dia manana puce A5 sy ram 512, mety ve?
Mamaly an'i Sda
Raha afaka nahita aho dia mila nametraka ny iOS 5.0.1 na iOS 5.1.1 ianao. Ny mini iPad tany am-boalohany dia nivoaka niaraka tamin'ny iOS 6. Tsy vitany izany.
Alfredo Escurra Guzman dia hoy izy:
Amin'ny iPad 3 azonao atao
Valiny tamin'i Alfredo Escurra Guzman
Alfredo efa vitanao tamin'ny iPad 3 ve izany?
Manana iray aho ary te hiverina amin'ny iOS 6.1.3
Ao amin'ny iPhone 5 azonao atao ihany koa, nataoko izany ary tena be dia be izany, inona no miasa satria ny iOS ilainao dia iOS 6 na taty aoriana, arahaba!
iOS 6 ho ahy no milamina sy tsara indrindra amin'ny rehetra ...
ny ambiny dia fako ary mihabe ny olana sy ny fanjifana….
Isan'andro ny iOS dia miharatsy, mihaverina betsaka noho ny hatramin'izay!
tsara izany, efa tamin'ny ora teo
ny fisintomana ny programa error 404 ao amin'ny rohy
Salama John. Ao amin'ny youtube dia manana ny rohy ianao.
Izy io dia miasa amin'ny iPhone 4?
ho an'ny iphone 4 dia manana ny geekgrade thethereds ianao
Valiny tamin'i BERNIE
olona afaka manao ahy sitraka amin'ny famelana ahy hampiasa ny mac-nao, hampihena ny ipad 2-ko
Leo Chaparro dia hoy izy:
Veloma icloud amin'ireo fitaovana ireo
Valiny amin'i Leo Chaparro
Jefersson quezada dia hoy izy:
Manala ny iCloud ve izany?
Mamaly an'i Jefersson Quezada
Tsara ny safidy, saingy fotoana fohy taorian'ny nahitako ny iOS 9 nanatsara ny ipad 2, izay heveriko fa ho toy izany, amin'izao fotoana izao dia mijanona ao amin'ny IOS 7 aho ary afaka mizaha toetra raha vantany vao mivoaka ilay kinova mahafantatra fa afaka miverina aho , ary etsy ambony mandritra izany fotoana izany dia mivoaha fitaovana azo antoka sy mora ampiasaina ho an'io fidinana ambany io
doop dia hoy izy:
Ny zavatra mahaliana dia ny fahafahana miverina any amin'ny iOS 7, izay ny rafitra manana ny tahan'ny fitoniana-fluidity-fampisehoana tsara indrindra hatreto. Manantena isika fa ny iOS 9 dia manatsara ny zava-bita amin'ny iPhone 4S satria ny ahy dia mbola miasa toy ny manintona afaka 3 taona sy tapany ary tsy hampiala azy amin'ny tsara aho ...
Mamaly amin'ny doop
Pablo Ariel Nicoli dia hoy izy:
Izy io dia miasa amin'ny iPhone 4 ??
Valiny tamin'i Pablo Ariel Nicoli
Montiel Chàvez Bernard dia hoy izy:
TSY MISAORANA NY ICLOUD IHANY NY TENY FITENIN'NY ORIGINAL OWNER dia manana JAAJAAAAJAJAJAJAJA ,, TSY AZONAO ATAOVANA BYPASS INDRAY IANAO MBOLA HANAO JAILBREA HANORATRA AMIN'NY ROOT MODE, FA RAHA TSY MBOLA TSY NANAO NY TENY FAMPIANARANA TSY MISY AZONAO FA TSY AZO ATAO. OMIT NY ASAIN'NY FIVAROTANA TSY TAFIKA AMIN'NY ICOUD, NOTHINGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Valiny tamin'i Montiel Chàvez Bernard
Mario crespo dia hoy izy:
Tamin'ny voalohany dia nieritreritra aho fa sandoka toy ny "fomba" maro hafa eto amin'ny Internet,
saingy nanandrana aho ary nahavita nampidina soa aman-tsara ny iOS 6.1.3 tamin'ny ios 8.3
Ankehitriny dia misidina ny iphone 4s-ko 😀
Valiny tamin'i Mario Crespo
Roxana Chavez dia hoy izy:
Olona iray avy any Mexico hanadino ny ipad-ko, $$$$$$$$$$, tsy manana mac URGEEEEEEEEE whatsapp +5213 3184 102 31
Valiny tamin'i Roxana Chavez
Namoaka programa hafa antsoina hoe Behinnd izy ireo ary mandeha miaraka amin'ny fandresena nataoko izany omaly tamin'ny faha-4 taonako ary handeha tsara eto ianao manana ilay horonantsary manazava ary afaka maka ilay programa koa ianao.
Salama hudiny. Hijery azy aho ary hamoaka azy. Matoky ny teninao aho 😉
Nivoaka niaraka tamin'ny mac izy fa raha tsy vitako izany dia tsy nampitandrina aho fa sandoka izany fa omaly nataoko tsy nisy olana izany satria nohavaoziko ho lasa 0.2 ny kinova, mahalana no tsy misy tranokala espaniola mahalala momba io, farafaharatsiny mba tsy hitako na oviana na oviana izany.
Eny, tsy misy mankafy 6.1.3
Nisy nahavita nampiasa FaceTime miaraka amin'ny iOS 6.1.3 amin'ny iPad?
Ash dia hoy izy:
Mety amin'ny iphone 5 ve izany? 🙁
Valiny tamin'i Ash
iPhone 5 miaraka amin'ny shsh eny
Tratry ny tsingerintaona faha-XNUMX, iPhone!
Azo apetraka amin'ny iPhone 9S ve ny iOS 4?